Huawei P8 Lite ၏ Bootloader ကိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုသော့ဖွင့်ရမည်နည်း Androidsis
အလယ်အလတ်တန်းစား Android ဆန့်ကျင်အကွာအဝေးအတွင်းအရောင်းပမာဏအရအအောင်မြင်ဆုံးသောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။ Huawei က P8 Lite ကိုမြှင့်တင်ရေးအတွက်ဥပမာ, ဒါက terminal ကို မီဒီယာ Markt Mania Mobile, ၂၂၉ ယူရိုသာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Huawei ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း
ဒါဟာဒီမပါဘဲသွားသည် Huawei P8 Lite bootloader သော့ဖွင့်ခြင်း Terminal သည်သူ့ဟာသူအတွက်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးထားရမည် သင်၏ထူးခြားသော Android terminal ဘာဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရော Androidsis တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုမစိုက်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်စာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်များကိုသာလိုက်နာရုံသာမကစ်မိဘဲနှင့်၎င်းသည်တည်ရှိနေသောရိုးရှင်းသော bootloader သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်အားမည်သည့်ပြproblemနာမျှမဖြစ်စေသင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူပြီးသင်၏ Huawei P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်လိုပါကကျွန်ုပ်အားဤစာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဆက်လုပ်ရန်နှင့်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုရှင်းပြရန်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ အဲဒါကိုရရန် tools များ။
1 Huawii ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Huawi P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
1.1 ၁- Huawei မှသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုတိုက်ရိုက်တောင်းပါ
1.2 2º- Huawei P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
Huawii ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Huawi P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
၁- Huawei မှသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုတိုက်ရိုက်တောင်းပါ
ပထမအဆင့်မှာ Huawei ၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့သို့အီးမေးလ်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအီးမေးတွင်အီးမေးလ်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။ mobile@huawei.com
မက်ဆေ့ခ်ျ၏ဘာသာရပ်တွင်သင်ထည့်ရမည် bootloader ကုဒ်ကိုတောင်းဆိုမှုသော့ဖွင့်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျ၏ကိုယ်ထည်ထဲမှာငါတို့ Android terminal ၏ဒေတာများပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ Huawei P8 Lite ၏ IMEI နံပါတ်၊ DualSIM ဖြစ်သည့် terminal တစ်ခုကဲ့သို့အချက်အလက်များသည်မည်မျှယုတ္တိနည်းသနည်း ကျနော်တို့နှစ်ခု IMEI နံပါတ်များကိုပေးရပါမည်.
ပြီးဆုံးဖို့အတွက်တူညီတဲ့စာထဲမှာရေးဖို့လုံလောက်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei P8 Lite ၏နံပါတ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သော terminal ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ဆက်တင်များ / ဖုန်းသတင်းအချက်အလက်များ / အခြေအနေ.
Huawei P8 Lite bootloader အတွက်သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုတောင်းဆိုသည့်သက်ဆိုင်သည့်စာကိုပေးပို့ပြီးသည်နှင့် တောင်းဆိုထားသောကုဒ်ကို ၂၄/၄၈ နာရီကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည် အီးမေးလ်မှတဆင့်လည်း။ ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Bootloader Unlock Code ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei P8 Lite ၏ Bootloader ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖွင့်ရန်ဤသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2º- Huawei P8 Lite ၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
လက်ခံရရှိကုဒ်နှင့်အတူငါတို့၏ clipboard မှကူးယူ Windows operating system နှင့်အတူကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ဥပမာအားဖြင့် notepad တစ်ခုသို့ကူးယူပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် ဒီဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ပြတင်းပေါက်များအတွက် executable ။exe ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။
Huawei P8 Lite ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သည် မူရင်းဒေတာကေဘယ်ကို အသုံးပြု၍ volume အနုတ်ခလုတ်များနှင့်ပါဝါခလုတ်တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖိ ထား၍ စာဖတ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Fast Boot mode ပေါ်လာသည်အထိပြန်မဖွင့်တော့ပါ။ "ဖုန်းသော့ခတ်ထား".
ယခု Windows desktop မှအသစ် install လုပ်ထားသော program ၏ icon ကိုနှိပ်ပါ အနည်းဆုံး ADB ကနှင့် Fastboot.
Classic MSDos command ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်မယ်၊ fastboot devices များ
အခြားအရာများအကြား၊ Huawei P8 Lite ၏နံပါတ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောလိုင်းကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းစာကြောင်းများ၏အဆုံးတွင်အောက်ပါ command ကိုရေးလိမ့်မည်။ fastboot OEM xxxxxxxxxxxxxxxx သော့ဖွင့်ကျနော်တို့ကိုအစားထိုးရမယ်ဘယ်မှာ "Xxxxxxxxxxxxxxxx" bootloader သော့ဖွင့်ကုဒ်အတွက် Huawei ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အီးမေးမှတစ်ဆင့်ယခင်အဆင့်၌ကျွန်ုပ်တို့အားကြင်နာစွာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဒီသော့ဖွင့်ကုဒ်က 16 ဂဏန်းကုဒ်ဖြစ်ရမည်
ဒီနှင့်အတူ Huawei P8 Lite သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည် Terminal ၏ Rooting ကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Huawei P8 Lite ၏ Root တစ်ခုကိုနောက်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ပေးလိမ့်မည်။
မသန်စွမ်း fasboot mode ကိုထွက်ပါTerminal သည်သူ့ဟာသူပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါက MSdos ၀ င်းဒိုးတွင်ဤ command ကိုသာရိုက်ရမည်။ fastboot reboot သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကို terminal မှ disconnect လုပ်ပြီးပါဝါခလုတ်ကို ၁၀ စက္ကန့် နှိပ်၍ MSDos command window သည်၎င်း၏အလုပ်ကိုပြီးဆုံးပြီလားဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Huawei P8 Lite ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
David DSJ ဟုသူကပြောသည်
ဤဆောင်းပါးသည်သင်ထုတ်ဝေသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ခြားအရာတစ်ခုနှင့်အခြားစာမျက်နှာတစ်ခုမှငါးပိတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ စာရေးသူသည် "... Terminal ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်အကွာအဝေးကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ အမြဲတမ်း command window ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ " ဟုသင်ရေးသောအခါ Huawei P10 Lite တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းနိုင်သောဘက္ထရီမရှိပါ။ သင်စာမပါဘဲသွားခြင်းမပြုဘဲစာကိုခြေရာခံလိုက်ရန်သင်အကြံပေးသော်လည်း၊ ၎င်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောဖုန်းမှဘက်ထရီကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသင်ရှင်းပြလိမ့်မည်။
David DSJ သို့ပြန်ပြောပါ
ငါ Power ခလုတ်ကို ၁၀ စက္ကန့်လောက်ဖိထားပါ။ သူငယ်ချင်းအမှားအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးသား
ကောင်းတယ် !!!! သန့်ရှင်းပြီးအမှားအယွင်းများမရှိဘဲ !!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်)
မေးခွန်းတစ်ခု - ဘယ်တော့လဲဒါကိုဘယ်လို root လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ဘယ်လို post လုပ်နိုင်မလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုရှင်းပြတဲ့အတိုင်းအရမ်းကောင်းတယ်။
Mate၊ ပုံမှန် p8 ကို root လုပ်မယ်ဆိုရင် bootloader ကိုသော့ဖွင့်ဖို့လည်းလိုမလား။
Alfredo Goenaga ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောညနေခင်းကျွန်ုပ်ဤသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်၏ P8 တွင်လိုက်နာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိုဂိုပေါ်တွင်သာတည်ရှိပြီးဆက်လက်မတည်ရှိတော့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် p8 ဖြစ်သောကြောင့်သင်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Alfredo Goenaga အားပြန်ကြားပါ
သူငယ်ချင်း၊ sigma က x8 ကို xXNUMX နဲ့ပြင်လားဆိုတာမသိဘူး
huawai p 8 lite သော့ဖွင့်နည်း
ဟဲလိုအော်ပရေတာဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုအတွက် p8 ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်
ယောက်ျားတွေ၊ ငါထည့်သင့်တဲ့ PIN နံပါတ်ကဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းက၎င်းသည်သော့ဖွင့်ထားသည်ဟုပြောပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား pin နံပါတ်တောင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းဒါကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား။ ! ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ ငါမှာအတူတူပဲပြproblemနာရှိတယ်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်၊ ဆဲလ်ဖုန်းကသူကသော့ဖွင့်ပြီလို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် sim အသစ်နဲ့စတာနဲ့သူကငါ့ကိုသော့ဖွင့်ကုဒ်တောင်းတယ်။ ငါဖြန့်ချိဖို့ငါအသုံးပြုတဲ့ကုဒ်ထားလျှင်, ငါ့ကိုအမှားပါပဲ။ သင့်မှာပြtheနာကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုသင်စိတ်ကူးရှိတယ်။
လူးဝစ် Gutierrez Carpio ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မှာ Huawei p8 lite ရှိပြီးသော့ဖွင့်စကားဝှက်ကိုရရှိထားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် fastboot oem unlock ထဲသို့ထည့်သွင်းမည်ဆိုပါကမသိသော်လည်းကျွန်ုပ်မည်သို့ကူညီရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
လူးဝစ် Gutierrez Carpio အားပြန်ကြားချက်
ကျွန်ုပ်၏ Huawei p8 ကိုသော့ဖွင့်ရန်တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်ပါစေ
AJAJA၊ ကျွန်တော်ပါဝါခလုတ် + volume up + အောက်ကတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ယခု Huawei Software Installing ကဤသို့ပြောလိုက်သည် - ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ xD ရှိသည့်အဖိုးတန်သော6GB application များနှင့် format လုပ်ခြင်းသည်အနံ့ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ ၄၀% အထိသွားတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် code ကိုတောင်းပြီးပါ။ သူတို့မပေးချင်ပါ။ တောင်းခံသည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အတည်ပြုထားသောကုဒ်ပါရှိပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကအခြားမည်သည့်နည်းလမ်းကိုမျှမသိပါ။ သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်။ သော့ဖွင့်ဖို့ကုဒ်
ငါအတူတူရှိနေတယ် .. သင်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ပြီလား။
ECHO 100% OK ကိုသင်ခန်းစာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဲဒါက miui redmi3note ကိုဖွင့်ဖို့ကူညီပေးတယ်။
rafael guerrero ဟုသူကပြောသည်
rafael guerrero မှစာပြန်ပါ
သေချာတာပေါ့ ... ကျွန်တော် LG LG ကြိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်၊
ငါ့မှာ hauwei p8 lite l 21 ရှိတယ်။ ငါ့ကို diyi ကဒ်ပြားနဲ့အတူပိတ်ထားတယ်၊ ငါ့ကိုခေါ်ခွင့်မပြုဘူး၊ jaztell's နဲ့ငါ့ကိုခွင့်ပြုပေမဲ့အခုငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Wilson Carreño ဟုသူကပြောသည်
ဖုန်းတွင် Serial နံပါတ် ၁၂ ခုသာရှိလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
Sebastian Concha Beltrán ဟုသူကပြောသည်
ငါ fasboot mode ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါဖုန်းကိုသော့မခတ်ဘဲဖုန်းကိုသော့ဖွင့်လိုက်တာငါမှာသော့ဖွင့်ထားတဲ့ bootloader ရှိပြီးသားလား ??? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sebastián Concha Beltránအားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း။ ဤသင်ခန်းစာသည် Huawei p100 lite အတွက် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်ကိုဒုတိယအရောင်းအဖြစ်ရောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်၊ ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ တူညီသောအဘို့အသော့ဖွင့်ရန်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့မှာ Huawei P8 lite ရှိပြီးကင်မရာကိုတို့ထိတဲ့အခါမှာသူကပြန်လည်စတင်ပြီးဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အထိပြန်မလာဘူး
ဟယ်လို။ စုံစမ်းမှုတစ်ခု၊ ငါ fasboot unlocked ရတယ်၊ အဲဒါက unlocked ပြီးပြီလို့ဆိုလိုတာလား။
ဤနည်းဖြင့် Bootloader ကိုသော့ဖွင့်သောအခါဖုန်းပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသလား။ အဖြေကအရေးကြီးတယ်။ ဂ
Hirán Garcia ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် Huawei ကကျွန်တော့်ကိုကုဒ်တစ်ခါမှမပို့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါတောင်းတာ ၁၂ ရက်ရှိပါပြီ။ ငါမိုဘိုင်း twrp နိုင်မှ bootloader သော့ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Plex သည်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အတူ 4.6 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
အခမဲ့ WiFi hotspot ကိုသင့်အနီးရှိ WiFiMapper ဖြင့်ရှာပါ